Testimonials of visitors of Merit Ethiopian Experience Tours - Ethiopia
You are here: Home > About > Ethiopia
Ethiopia is a country in which the whole story of Man from his first beginnings million of years in the past, through all the stages of his evolution and development, may be studied with awe and wonder. The discovery of Lucy (3.25 mil years old) or Dinknesh at Hadar in Northeaster Ethiopia by Dr. Donald Johanson of Cleveland University rocked the world of palaeonthropology by pushing back the ancestry of our species at least a million years further into the past. The finder of the fossil says, “ Its bones will make Ethiopia the hominid – fossil center of the world” - as others attest Ethiopia as the ‘Cradle of Mankind’.
With a private customized tour of Ethiopia with Merit Ethiopian Experience Tours, you can learn history, expreince culture and explore the nature of Ethiopia. If visitors of Ethiopia or Addis Ababa have a short time to spend on tour, Merit Ethiopian Experience Tours organizes short tours of Addis Ababa or Day Tours from Addis Ababa.